आदरणिय दाजु कृष्ण बहादुर गिरी (सिद्धबाबा) मा ढाेग नमस्कार ।
मनमा अत्यन्त खेद छ। आफुलाइ बिर्सिएर, आफ्नो प्राप्तिलाइ स्थायित्व दिन नसकेर, भ्रष्ट,लाचार र व्यापारीलाई समितिमा राखेर समितिकाे आडमा पैसा र शक्ति दुरुपयोग गरि वैदिक सनातन धर्मका नाममा अवैधानिक र अधार्मिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आइरहदा आश्रम भित्र र बाहिर का केही महिलाहरुलाई चेलि बनाइ अवला व्रम्हचारीकाे नाममा आफु स्यंम नैतिकरुपमा पतन भइ , पर स्त्री काे धर्म नष्ट गरि याैन शाेषन गर्दै आएकाे घटना र प्रमाण यथेष्ट हुदा हुदै डाेकाेले छाेपेकाे याे पछिल्लो घटना दुर्भाग्यवश बाहिर निस्कन पुगेको रहेछ। गल्ती त आफुले गर्याै तर तिम्रो अपराध लुकाउन निर्दाेष म माथि तिमी स्वंम र तिम्रा अन्धभक्तले यस्ता प्रमाणित घटनालाई सुनुयाेजित षड्यन्त्रकाे नाम दिई षड्यन्त्रकारी काे रुपमा मेराे नाम लिएर आफ्नाे लाज पचाउने र लङ्गडाे सरकार, प्रशासनलाई नालिमा सुताउने कार्य गर्न सफल भयौं । तर तिमी र तिम्रा निकटले षड्यन्त्र गरि फसाएकाे भनेकोले तुरुन्त स प्रमाण षड्यन्त्र कारीकाे नाम बाहिर ल्याई कारबाही गर !
दाेस्राे कुरा यस्ता घृणित कुकर्म गर्दा र एउटा निर्य नारीकाे याैन शाेषण भइरहदा पनि सरकारले तिमी जस्ता धर्म गुरुकाे तलुवा चाट्दै तिमिलाई जेल जानबाट बचायाे । सायद म तिम्रो भाइ भएर नै हाेला तिमी गलत भए पनि तिम्रो शरिरले जिउँदै जेल जस्तो नरकमा भने नबसे हुन्थ्यो भन्थे यस्मा तिमी सफल भयाैं दाजु तिमीलाई दाजुको नाताबाट विशेष बधाई छ।
तर म एउटा धर्मगुरु,याेगिमहाराजकाे हकबाट बाेलिरहदा धर्म ,विधि ,विधान,निति नियम,शुषान जस्तो नेतृत्व स्थानमा रहेर पवित्र वेद र भेष काे दुरुपयोग गरेकोमा र साम्प्रदायिक त्रिदण्डी,जगदगुरु,सिद्धबाबा,विद्वान डाक्टर जस्तो स्वघाेषित पदलाई स्थायित्व दिने कडा परिश्रमकाे सघाँरमा उभिएको बेला तिमी जस्ता पात्रलाई सजाय दिने कानुन त कस्तो हुनुपर्छ कल्पना गर्न पनि सक्दिन! याद रहाेस आज मुठीभर टिकाबहादुरहरु जतिमाथि रहे पनि याे समग्र हिन्दु ॐकार परिवारकाेलागि मन्द बीस हाे। यति मात्रै हाेइन यहाँ गलत कुकर्म गर्नेकाे हिरासत हस्पिटल बन्नुपर्ने ट्रेन बसेकाे छ,प्रशान,प्रहरी ,सरकार ,अदालत ,कानुनको धज्जी उढेकाे छ। आश्रम -धर्मगुरु र महिलामाथी शङ्का र प्रश्नचिह्न उठेको छ।
दाजु याे मेराे पत्र त अवश्य नै पच्य छैन हाेला! तर जे भए पनि तिमीलाई मेराे विनम्र अनुराेध छ। म जहा भए पनि अहिलेसम्म समाज प्रति,परिवार प्रति,राष्ट्र प्रति र धर्म प्रति सकरात्मक छु।मैले देशलाई केही दिन नसके पनि मात्रै म र मेरो परिवार प्रति जिम्मेवार बन्न सके भने मात्रै पनि मैले राज्लाई ठुलाे याेगदान पुर्याउन सक्छु । अभ्यासमा छु। म जस्ताे लाखौं युवा र परिवार आत्मनिर्भर बन्नु नै मेराे देशले समृद्धिकाे मुहार फेर्नु हाे। यदि लाखौं युवाहरू म जस्तो धर्म र निति प्रति वफादार कर्तव्यनिष्ठ हुनु नै सभ्य समाज र कानुनी राज्यको स्थापना हुनु हाे दाजु मेराे अनुराेध छ मेराे अंगभंग गर्ने र ज्यान मार्ने याेजना तिमी र तिम्रा चेलाहरुले पहिले पनि बनाएका थिए, अहिले पनि बनाउदै छन अरे, तिमी सग त पैसा छ ,शक्ति छ। मलाई मारे पनि तिमीले केही लाख अदालतमा बुझाउने बित्तिकै छुटकारा पाउछाैं। म सग त सत्य भन्दा केही छैन । याे त असत्य काे राज्य रहेछ, तिमी मेराे पछि लाग्नुकाे सट्टा आफुलाई संयम बनाउ।
म एउटा अहिलेसम्मकाे परिश्रमी हुँ परजीवी भएको छैन। के गर्ने दाजु धर्म , धर्मगुरु ,राज्य र कानुन यस्तै त हुदाेरहेछ, जे हाेस अझै आशाबादी छु। जे भए पनि तिम्राे सामु माैका आएकाे छ। यदि धर्मकाे रक्षा गर्दै आत्मा माेक्षकाे लागि नै तिमी सन्त भेष धारण गरेका हाै भने तिमी कति पनि विचलित नभइ आफ्नाे गन्तव्य तिर फर्क सिंहसान,मान,पदबी,याे सबै भ्रम र दिग्भ्रान्ती हाे दाजु। मैले तिमीलाई १० वर्ष पहिल्यै भनेको थिएनी ! तिम्रो सन्त भेष नै पुज्य छ । सदाचारी र कर्तव्य निष्ठ मात्रै बन भनेर । तर तिमीलाई यी शब्द र मेराे अनुहार तिम्रो लागि त्यस बेला बीस बन्याे । सायद यश घडीमा कतै याद पनि त आयाे हाेला नि!
यति लेख्दै विदा चाहे, फेरि अर्को पत्रमा भेटाैला।
उहीँ तिम्रो निष्ठुरी भाइ ।।